Fitokanana ny “Hotspot Wifi” – Lapan’ny tananan’i Tolagnaro
© Photo Présidence de Madagascar
Nanohy ny diany tao Tolagnaro ny Filoham-pirenena androany 20 janoary 2021.
Nandritra izany no nanokafany amin’ny fomba ofisialy manoloana ny Lapan’ny Tanànan’i Tolagnaro ny “hotspot wifi” hahafahan’ireo mponina, indrindra ny tanora ao an-toerana misitraka internet maimaimpoana.
Miisa 50 ankehitriny ny toerana tahaka ity napetraka manerana an’i Madagasikara ho fanatanterahana ny veliranon’ny Filoha Andry Rajoelina, dia ny fampivoarana an’i Madagasikara amin’ny alalan’ny teknolojia sy ny haitao ara-kajy mirindra.
Nanentana ireo tanora araka izany ny tenany, hampiasa ireo teknolojian’ny fifandraisan-davitra, indrindra amin’ny fianarana sy ny fikarohana,mba hampitombo ny fahalalan’izy ireo ary koa mba hisokatra amin’izao tontolo izao.
© Présidence de Madagascar https://www.facebook.com/616973818381805/posts/3681967435215746/
“Ny fitondram-mpanjakana, amin’ny alalan’ny MPTDN dia mikendry mba hipaka mivantana amin’ny filan’ny vahoaka malagasy ireo tetik’asa apetraka, mba hanamaivanana ny andavan’androm-piainan’izy ireo. Isan’izany ny Tetik’asa HOTSPOT WIFI MPTDN, lalana makany amin’ny fampisitrahana maimaimpoana anterineto ny vahoaka malagasy.” Hoy ny Minisitra RAMAHERIJAONA ANDRIAMANOHISOA androany nandritra ny lanonana nanokanan’ny Filoham-pirenena ny Hotspot tao Tolagnaro.